Nanomboka, omaly, ny hetsika fitsaboana ataon’ny Médecins de l’océan Indien (MOI) any amin’ny distrikan’Ihosy, hatramin’ny 10 avrily ho avy izao. Hifarimbona handray an-tanana olona hatramin’ny 10 000 mandritra izany ny mpitsabo 52 manana fahaiza-manao samihafa avy any ivelany sy Malagasy. Manohana ny hetsika ny mpandraharaha eto an-toerana sy ny Amadia ary ny mpiray ombon’antoka maro. Horaisina an-tanana ny maso, ny nify, ny taovam-pihinanan-kanina…Hisy ekipa hitety vohitra ho an’ireo fianakaviana tsy afaka hanatona ny hopitaly ao Ihosy. Mitarika ny mpitsabo ny dokotera Koytcha.
Hosantarana, anio, ny iray volana ho an’ny fanentanana momba ny “autisme” eto Antananarivo sy amin’ny faritra maromaro. Betsaka ny zavatra nomanin’ny fikambanana Autisme Madagascar ka hisantarana izany ny famelabelarana « l’autisme et toi » momba ny “autisme” ao amin’ny Plaza Ampefiloha iarahana hifampizara amin’ny manampahaizana sy ny ray aman-drenin’ireo ankizy “autiste”. Hisy koa ny “flash mob” miainga avy eny Mahamasina ny antoandro. Fanentanana ho an’ny rehetra ny fanaovana akanjo manga amin’io fotoana io ho fanamarihana ny fiarahana amin’ireo fianakaviana manana havana na zanaka “autiste”.
Hotanterahina rahampitso ny fifanintsanana isam-paritra ho an’ny fifaninanana « Rallye mathématiques ». Ho an’ny eto Analamanga, horaisina eny amin’ny lycée Jules Ferry ireo mpifaninana. Ho an’ny faritra Atsimo Andrefana, ao amin’ny collège Français. Ao amin’ny collège Français François Dolto kosa any an’ny faritra Boeny. Ny any Diana, hotontosaina ao amin’ny Collège Français. Ny any Alaotra Mangoro, eny anivon’ny CEG Razaka raha ao anatin’ny collège Français Julverne kosa ny ao Vakinankaratra. Eny amin’ny foiben’ny DreneTP ny ho an’Atsinanana. Any Matsiatra Ambony, handray ny fifaninanana ny lycée Raherivelo Ramamonjy ary ao amin’ny lycée Pôle ny ho an’ny faritra Anosy. Ekipa iray isaky ny “catégorie” no misolo tena ny sekoly. Tokony hisy mpampianatra iray avy amin’ny sekoly mpifaninana mba hisian’ny fangaraharana tanteraka eo amin’ny fitsarana.